Xildhibaana ka walaacsan ciidan la sheegay in ay DFS geysay Baydhaba – Kalfadhi
Qaar ka mid ah Xubnaha Baarlamaanka Golaha Shacabka, ee ay Deegaan-doorashadoodu tahay Koofur Galbeed, ayaa Dowladda Federalka Soomaaliya (DFS) ka dalbaday iney dib uga celiso magaalada Baydhaba ciidamo la sheegay iney maanta geysay halkaas. Shirjiraa’id, oo ay qabteen, ayey Xildhibaanada Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) iyo Xaniifa Xaabsade ku sheegeen iney ka walaacsan yihiin ciidamadaas. Taas kasakow, waxay baaq u direen AMISOM, si ay dhex dhexaad uga noqato DFS iyo Koofur Galbeed. Beesha Caalamka ayey, sidoo kale, farriin u marsiiyeen shirkooda.
Xildhibaanadu waxay shirkooda-jaraa’id ugu gudbiyeen DFS ineysan baabi’in hormarada laga gaaray dhinaca siyaasadda, bulshada iyo ammaanka ee dalka. AMISOM waxay ugu baaqeen ammaanka “oo ah” bey yiraahdeen “ujeedadii ay dalka u yimaadeen in aysan cid kale ku haleyn”, sida ay hadalka u dhigeen. Taas waxay ku tilmaameen miro dadaalkooda ku yimid.
Xildhibaan Aadan Madoobe waxa uu yiri “arrintani waxa ay ka hor imaanneysaa shuruucda dalka, heshiishkii iyo kalsoonidii Ummadda Soomaaliyeed, wanaagii socday oo billowdayne waa ay burburineysaa”. Waxa uu ku eedeyey dowladda in ay sameeneyso wax ka soo horjeeda Dastuurka Soomaaliya, shuruucda dalka iyo tan Dowlad Goboleedyada, waxa uuna in ciidan Baydhaba la geeyey ku tilmaamay mid aan munaasab ahayn. “Saasdaraadeed” buu yiri “dib ha loogu celiyo ciidankaas meeshii laga keenay”.
Xildhibaan Xaniifa Xaabsade, oo Xildjibaan Aadan kula lammaaneyd shirkajaraa’id, ayaa sheegtay in aysan Koofur Galbeed ku fara-gashan DFS awoodaheeda, iyadana ay sidaas oo kale la gudbooneyd. “Koofurgalbeed, Dowladda kuma ma faragashato Ciidanka, Lacagta, Arrimaha Dibadda iyo shaqada Federaalka oo dhanba, marka iyaguna waa in ay faraha ka qaadaan Arrimaha Gudaha Koofur Galbeed” ayey tiri Xildhibaan Xaniifa.
Xildhibaan Aadan Madoobe, AMISOM ayuu ku celceliey iney dhex-dhexaad ka noqoto arrimaha nabad illaalinta ee dalka. “Madaama ay wakiil Caalamka ugu yihiin illaalinta nabadda Soomaaliya, oo aannan isku filneyn, waajibkiinna gutta oo dhex-dhexaad ka noqda howlaha ka dhacaya dalka” ayuu yiri Aadan Madoobe. “Maanta dhibaatada dib u billaabatay waa tii aad darteed u timaadeen, hadii wax dhacaan adinkoo joogana waxa ay tirtireysaa howshii aad soo qabateen iyo dadaalkiinnii, eeddaasna wax-baad ku yeelan doontaan, marka walaalayaal arrintaas wax ka qabta” ayuu raaciyey hadalkiisa.
Xildhibaan Aadan, oo ku dheeraaday Shirka jiraa’id, ayaa la dardaarmay Xildhibaanada Koofur Galbeed. “Yaan cidi idin cadaadin; xor ayaad tihiin. Ciddii aad rabtaan doorta, waana ognahay cadaadiska la idinku haayo” ayuu yiri Xildhibaanku. Isagoo sharaxaya culeyska siyaasadeed ee Koofur Galbeed haysta ayuu sheegay in Madaxweynihii Koofur Galbeed xilka ka tagay waqtigiisii ka hor, isagoo xafiiskiina baneeyey iyo xiligaas ka hor oo ay kala tageen Guddigii Doorashada Koofur Galbeed, oo intooda badan is casilay.
Arrintan ayaa timid markii ciidan la sheegay iney Dowladdu ka dirtay Muqdisho ay gaareen Baydhaba. Horay ayaa sidaas oo kale loogu eedeeyey DFS iney ciidan, gaadiid, hub iyo lacag fara badan u geysay Baydhabo, balse dowladdu ma diidin mana ogolaan arrimahaas oo dha. Koofur Galbeed waxay DFS si joogta ah ugu eedeysaa iney laaluushto Xildhibaanadooda, si ay u soo saarto musharaxiin ay gadaal ka taagan tahay.